Deputy Branch Manager (Banking- Sector) | Excellent Fortune Development Group
Deputy Branch Manager (Banking- Sector)
• ဘဏ်ခွဲတာဝန်ခံ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို အစားထိုးတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။
• ဒုတိယတာဝန်ခံအနေဖြင့် ဘဏ်ခွဲ၏ Operation’s productivity and efficiency တိုးတက် ကောင်းမွန် စေရေးအတွက် အဓိကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။
• ဘဏ်ခွဲ၏ တစ်နေ့တာလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများနှင့် ငွေသားစီးဆင်းမှုအခြေအနေ၊ ငွေကြေးနှင့် ပတ်သက် သည့် ကိစ္စရပ်များအား တကျမှန်ကန်စွာဖြင့် အမှားအယွင်းမရှိစေရန် တာဝန်ယူဆောင် ရွက်နိုင်ရ မည်။
• ဘဏ်ခွဲလုပ်ငန်းများတစ်နေ့တာ မှန်ကန်မြန်ဆန်စွာဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန်နှင့် နေ့စဉ် စာရင်းပိတ်နိုင်ရန် အတွက် အဓိက တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမည်။
• ဘဏ်ခွဲ၏ သတ်မှတ် Budget အားကောင်းစွာစီမံခန့်မှုကိစ္စအား ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရမည်။
• ဘဏ်ခွဲအတွက် ချမှတ်ထားသည့် Target များကို ပြည်မီစွာအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရာတွင် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် ရမည်။
• ဘဏ်ခွဲဝန်ထမ်းများအား လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း အနီးကပ်ကြီးကြပ်ခြင်း၊ စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ သင်ကြား ပြသခြင်းများကို ဆောင်ရွက်ရမည်။
• လုပ်ငန်းများလျှင်မြန်ချောမွေ့စေရန်အတွက် ရုံးချုပ်နှင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ အစီရင်ခံ တင်ပြခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ရယူခြင်းများကို ဆောင်ရွက်ရမည်။
• ဘဏ်ဝန်ထမ်းများနှင့် ဘဏ်နှင့်ဆက်သွယ်သူများအားလုံး၏ Compliant များကိုး အလျှင်မြန်းဆုံးနှင့် အကောင်းဆုံး နည်းလမ်း ရှာဖွေဖြေရှင်းတိုင်ရမည်။
• စျေးကွက်ခြေအနေများကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ရုံးချုပ်နှင့် ဘဏ်ခွဲဝန်ထမ်းများကို ပေးပို့ဖြန့်ဝေပေးနိုင်ရမည်။
• တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲ့ရရှိသူ ဖြစ်ရမည်။ (ဘဏ်လုပ်ငန်း (သို့မဟုတ်) စီးပွားရေးပညာနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဘွဲ့, Diploma, Degree, Master ဘွဲ့ရရှိထားသူများ ဦးစားပေးမည်။)
• ဒုတိယတာဝန်ခံရာထူးဖြင့် အနည်းဆုံးလုပ်သက် (3)နှစ်နှင့်အထက် ရှိရမည်။ ဘဏ်ခွဲတာဝန်ခံ တဆင့် နိမ့်ရာထူးဖြင့် လုပ်သက် (၅)နှစ်ထက်မနည်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ရမည်။ ဘဏ်ခွဲ ဒုတိယ တာဝန်ခံ လုပ်ငန်းများအားလုံး ကျွမ်းကျင်စွာ သိရှိ/စီမံကွပ်ကဲနိုင်ရမည်။
• Core Banking System အား အတွေ့အကြုံရှိပြီး ကောင်းမွန်စွာအသုံးပြုနိုင်ရမည်။
• Daily Closing Process အား Manual နှင့် System နှစ်မျိုးစလုံးနာလည်းတတ်ကျွမ်းရမည်။
• ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်၍ Teamwork ဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
• MS Office (Word, Excel, Power Point), Internet & Email ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ရမည်။
• ဘဏ်ခွဲဒုတိယတာဝန်ခံ (သို့မဟုတ်) တတိယတာဝန်ခံအဖြစ် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေသူ/ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့ သူများအား ဦးစားပေးစဉ်းစားမည်။
Can you travel if needed?
Can communicate English?
Did u have related experience in Banking fields?
What will be your strongest point?
Deputy Manager For Corporate Application Team
Deputy Manager For Product Development
B2B Deputy Manager
Deputy General Manager, Retail Banking Operations
Branded Shop Planning (CS-1)-Junior Deputy Manager